प्रधानमन्त्री ओली « Lokpath
२०७७, १५ मङ्सिर सोमवार १५:३२
अब प्रधानमन्त्री ओली टिकटकमा, के छ पहिलो भिडियोमा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नामबाट टिकटक अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको @kpsharmaoli_official नामक अकाउन्ट सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको भव्य तयारी छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारदेखि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण सफल बनाउन भव्य तयारी गरिएको बताउनुभएको छ । चौँसठ्ठीऔँ प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी चीनको ७०औँ जनगणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज ट्वीट गर्दै चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री ली खस्याङ्मार्फत आफ्नो र नेपाल सरकारका
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण कोषलाई विगतको अनुदानको ढाँचाबाट परिवर्तन भई गरिबी निवारणसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालय र निकायका लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’का रूपमा रूपान्तरित हुन निर्देशन दिनुभएको छ
हलो जोतेर आएको मान्छे हुँ, किसानका समस्या राम्ररी थाहा छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू हलो जोतेर आएकाले किसानका समस्याका बारेमा राम्रोसँग जानकारी भएको बताउनुभएको छ । कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघको प्रथम केन्द्रीय कमिटीको
नयाँ प्रधानमन्त्री निवास म बस्नलाई होइन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बन्न लागेको नयाँ प्रधानमन्त्री निवास आफू बस्नको लागि नभएको बताउनुभएका छ । बिहीबार उक्त भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बनाउँदा पनि र नबनाउँदा
दुई हप्ता लामो सिंगापुर बसाइपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता बढ्यो
काठमाडौँ । दुई हप्ता लामो सिंगापुर वसाईपछि शुक्रबार स्वदेश फर्किनुभएका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय देखिनुभएको छ । शुक्रबार दिउँसो करिब १ बजे स्वदेश फर्किनुभएका ओली र उहाँका
सिंगापुरमा उपचार गराएर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । सिंगापुरमा दुई साता लामो उपचारपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँ थाई एयरवेजको विमानबाट दिउँसो १२ः ५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गर्नुभएको हो
प्रधानमन्त्री ओली भोली स्वदेश फर्किँदै, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोली स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुभएका प्रधानमन्त्री ओली उपचार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन लाग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार
केपी शर्मा ओली पक्षबीच बालुवाटारमा छलफल
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बैठकबाट बाहिरिए घनश्याम भुसाल
नेकपाको विज्ञप्तिमा अटेनन् माधवकुमार नेपाल : नियोजित कि